Taariikhda Furitaanka ee 1915 Çanakkale Buundada Waa La Shaaciyay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara17Taariikhda Furitaanka ee 1915 Çanakkale Buundada ayaa La Go'aamiyay
24 / 02 / 2020 17, GUUD, hyperlinks, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, VIDEOS
masaafadii saacaddii ayaa hoos u dhici doonta buundada Canakkale
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan ayaa sheegay in 1915 Bridge Bridgeanakkale Bridge uu qaadan doono booska koowaad ee aduunka marka laga hadlayo howlaha injineerinka.
Mashaariicda ugu Turkey ayaa muhiim ah in 1915 Dardanelles Bridge, Turhan ka wasaaraha si uu ugu caddeeyo waxbarashada ee goobahaasi, maamulka macluumaadka helay.
Goor danbe oo statements suxufiyiinta xadka Turhan, Turkey-Iran ay sabab u tahay dhulgariirkii ka dhacay Van, naxariisto kuwa naftooda ku waayey oo u rajeeyay dadka dhaawaca soo kabsasho degdeg ah.
Canakkale, Turkey galbeed ee dilayo Turhan waxay ahayd magaalo muhiim ah, xusuusannaa in 100 sano ka hor siiyey dagaal weyn waayo madaxbannaanida qaranka Turkish ee gobolka this.
Turhan wuxuu carrabka ku adkeeyay in umada Turkigu ay xornimadeeda ka heshay dalalkan wuxuuna yidhi, “Waxaan halgan qaran uga soo horjeednay dhamaan dawladaha adduunka ee awooda badan waxaanan aasaasnay ​​aasaaska wadanka aan hadda aasaasay. Maanta waxaan dhisaynaa buundada weyn ee xayiraadda ugu weyn adduunka si aan ugu darno bog cusub oo lagu qoro xarfaha dahabiga ah taariikhda umadeena. Markii buundadan la hawl geliyo, waxay qaadan doontaa booska koowaad ee adduunka marka laga hadlayo shaqooyinka injineernimada. Waxaan rajeyneynaa, inaan qorsheyno inaan buundadan adeeg galno oo aan u furno taraafikada Maarso 2022. ayuu hadlay.
Dhererka Xargaha Feejignaanta ee loo adeegsan karo Buundada 162 kun oo Kiiloomitir
Isagoo cadeeyay inay arkeen in barnaamijka shaqada lagu fuliyay qaabkii loo baahnaa ee baaritaankooda goobta dhismaha, Wasiirka Turhan ayaa ku nuuxnuuxsaday inay dhameystiri doonaan qaybaha harsan ee dhismaha oo ay buundada geli doonaan labo sano gudahood, wayna sii wadeen:
Waxaan ku dhisaynaa mashruucan qaab dhismeedka-ku-wareejinta ah. Mashruucu wuxuu ku kacayaa 2,5 bilyan oo yuuro. Ilaa hadda, waxaan sameynay 1 bilyan 250 milyan euro. Si kale haddii loo dhigo, boqolkiiba xaqiijinta shaqadu waa boqolkiiba 50. Waxaan rajeyneynaa, waxaan qorsheyneynaa inaan dhameystirno qaybaha harsan labada sano ee soo socota oo aan ku darno howlaha. Masaafada u dhaxaysa labada munaaradood waa 2023 mitir. Waxaan ku dhisaynaa mashruucan dhererkiisu yahay 100 mitir, oo loo hibeeyay sannadguuradii 2023aad ee jamhuuriyadeena. Masaafada u dhexeysa dariiqyada fiilooyinka iyo meelaha fiilooyinku ku xirnaan doonaan waa 4 mitir. Si kale haddii loo dhigo, dhererka guud ee buundadayada oo wadata geedi socodku waa 100 kun 4 mitir oo leh fogaanno dheeri ah oo ka baxsan munaaradaha. Ballaca sagxadda waxaa loogu talagalay 100 mitir. Cagaha waxay ka hooseeyaan 45 mitir heerka badaha. Miisaanka birta loo isticmaalay dekeddu waa 318 kun oo tan. Miisaanka fiilooyinka loo isticmaali doono dhismaha buundadan waa 49 kun 33 tan. Mar labaad, dhererka fiilooyinka waa 268 kun kilomitir. Waxaan isticmaali doonnaa 162 kun oo tan oo bir ah oo dhismaha biriijka ah. Caddadka la taaban karo ee aan u isticmaali doonno wajiga soo-geynta oo ay ka mid yihiin ku-dhowaanshaha qallafsanaanta waa 114 kun oo tan. ”
“Gudbinta wadada Çanakkale Strait waxaa loo dhimayaa 6 daqiiqo”
Isagoo soo bandhigaya macluumaad ku saabsan ujeedada buundada, ayuu Wasiir Turhan sii waday khudbadiisa sida soo socota:
Gobolka Aegean, Gobolka Marmara waa mid ka mid ah gobollada laga soo saaro alaabada muhiimka ah ee dhoofinta sida beeraha, dalxiiska iyo warshadaha. Waxaan u dhoofinaa qayb muhiim ah oo dhoofintayada ah dalalkeenna Yurub, Waqooyiga Aasiyada, waddamada Afrika ee saxanka Badda Mediterranean-ka iyo waddamada kale ee Koonfurta Aasiya. Waxaan u qabanaa wadamada Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika. Çanakkale wuxuu hada u noqon doonaa buundo dhoofintayada iyo furitaanka buundadan. Waxay noqon doontaa dhidib gaadiid muhiim ah. Waqti dheeri ah laguma lumi doono sugida boorarka gawaarida ee ka shaqeeya Dardanelles. Wadada Dardanelles, oo qaadata ugu yaraan 1,5 saacadood iyo 5 saacadood oo taraafikada culus, waxay hadda hoos u dhici doontaa 6 daqiiqo. Tani waxay noqon doontaa waqti badbaadin muhiim ah, sidoo kale waa guul muhiim u ah kuwa sido ama dhoofisa alaabadaas. Intaas waxaa sii dheer, taraafikada ka imaanaysa Yurub dhanka dhulka iyo qeybo ka mid ah Waqooyiga Marmara, dhinaca galbeed ee Istanbul, dhinaca Thrace, oo kala ah Küçükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Çatalca, Silivri, ilaa Gobolka Aegean. Gaadiidkooda ay ku tagayaan Gobolka South Marmara, waxay awoodi doonaan inay gaadiid ka helaan masaafad gaaban iyo waqti gaaban ayagoo adeegsanaya buundadan iyagoon soo galin Istanbul.
Turhan wuxuu caddeeyey inay dhammaystireen 50 boqolkiiba buundada guud ahaan, waxayna tidhi, "Waxaan gaarnay 318th mitir oo dhererkiisu yahay 171 mitir, taas oo ah waxyaabaha ugu weyn ee dhismaha buundadan. Waxaan rajeyneynaa inaan dhameystirno wax soo saarkeena munaaradda sida Juun, oo waxaan bilaabi doonnaa xadhkaha fiiqidda buundada dhamaadka dhamaadka xagaagan waxaanan daaha ka qaadi doonaa silsiladda biriijkeenna. Nasiib wacan dhamaanteen. tibaaxaha loo adeegsaday.
1915 Filim Animation Bridge ah Çanakkale
Baaskiilkii Xabsiga Xanuun ee Xanuun ayaa la sameeyey ka hor
1915 Bridge oo loo yaqaan 'Canakkale Bridge Bridge'
Maanta taariikhda: 26 Janaayo 2017 1915 Qandaraaska loogu talagalay Bridge ee Caanakkale
Maanta taariikhda: 26 Janaayo 2017 1915 Buundada Canakkale ...
Furitaanka Taariikhda Khariidadda Khariidadda ee Halic Metro
Dabeecadaha Bogga Saddexaad ee Bosphorus Bridge (Video)